Mayelana NATHI - Ningbo Pntek Technology Co., Ltd.
Ama-valve we-PPR nokufakwa
Ama-valve we-CPVC nokufakwa
HDPE ipayipi nokufakwa
PP kokucindezelwa valve futhi nokufakwa
I-Ningbo Pntek Technology Co., Ltd.
Sitholakala e-Ningbo idolobha, esifundazweni saseZhejiang. Singabahlinzeki abangochwepheshe bamapayipi epulasitiki, okufakwa kanye nama-valve aneminyaka eminingi athumela ulwazi. Imikhiqizo yethu eyinhloko yenkampani yile: UPVC, CPVC, PPR, ipayipi le-HDPE nokufakwa, ama-valve, amasistimu wokufafaza kanye nemitha yamanzi konke okwenziwe ngokuphelele yimishini ethile esezingeni eliphakeme nezinto zekhwalithi enhle futhi ezisetshenziswa kakhulu ekunisela ngenkasa nokwakha.
Sebenzisa isayensi ukuzuzisa isintu, sebenzisa ubuchwepheshe ukuhola impilo
Abasebenzi baseNingbo Pntek bazosebenzisa imali enkulu njengesixhumanisi, isayensi nobuchwepheshe njengokusekelwa, nemakethe njengomthwali, ukudlala indima yesilinganiso senzuzo kanye nesikhungo se-R & D ngesisekelo somugqa wemboni wepayipi lepulasitiki, ukusebenzisa isu le brand elidumile, isu lokukhulisa isikali namasu entuthuko. Isu elisha lokuthuthukiswa komkhiqizo "eliphakeme, elisha futhi elibukhali" lenza imikhiqizo ihluke.
Kungani ukhethe thina?
Kusukela kwasungulwa inkampani futhi ngaso sonke isikhathi senza konke okusemandleni ethu ukwanelisa izidingo ezingaba khona zamakhasimende ethu.
Isinyathelo ngasinye sezinqubo zethu zokukhiqiza sihambisana nezinga lomhlaba jikelele le-ISO9001: 2000.
Inkampani yethu izimisele ngobuqotho ukubambisana namabhizinisi emhlabeni wonke ukufeza isimo sokuwina.
I-Ningbo Pntek inikeza kuqala ikhwalithi namakhasimende ethu futhi ithole ukwazisa kubo bobabili ekhaya nakwamanye amazwe.
Sithatha amadoda njengesisekelo futhi siqoqa iqembu eliphakeme labasebenzi abasemqoka abaqeqeshwe kahle nabasebenza ekuphathweni kwamabhizinisi kwamanje, ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukulawula ikhwalithi nobuchwepheshe bokukhiqiza.
Umgomo wethu ukuthola ukwethembeka kwamakhasimende ethu bese siphinda ibhizinisi ngokunikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani okuncintisana Ukugcina ileveli ephezulu kakhulu yamakhasimende.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa eNingizimu Afrika, Middle East, Southeast Asia, South Asia, Central Asia, Russia, South America, North Africa, Middle Africa nezinye izifunda nezifunda.
Ipayipi elingaphansi komhlaba
Uhlelo Lokuphakelwa Kwamanzi
Ikheli:IHengjie Town, Isifunda saseHaishu, iNingbo Zhejiang, China